China Shot Blasting Equipment, Shot Blaster, Tumble Shot Blasting Machine - Puhua
Puhua dia manome fitaovana fanapoahana tifitra, blaster shot, milina fanapoahana tifitra sns. Ny Qingdao Puhua Heavy Industrial Group dia naorina tamin'ny 2006, kapital voasoratra anarana maherin'ny 8.500.000 dolara, faritra manodidina ny 50.000 metatra toradroa. Manana vondrona orinasa efatra ny vondrona.
Masinina miparitaka amin'ny rojom-bolo
Chain Type Shot Blasting Machine Q38 series Hanging Chain Shot Blasting Machine dia mampiasa ny fomba fihodinan'ny teboka marimaritra iraisana sy ny fanadiovana, manala ny hoditra fasika sy oksida eo amin'ny sehatry ny fanariana, mba hisehoana loko metaly. Ampiasaina matetika amin'ny kojakoja fiara sy ny bolster, ny sisiny, ny fitambaran-javatra ary ny zotram-piaramanidina faribolana, amin'ny fotoana iray ihany koa dia afaka manadio ny fantsom-batana sy ny kojakojam-pitaovana kely mitovy habe aminy.
Hamaky bebe kokoaSend Inquiry
Masinina fanapoahana basy
Hanger Shot Blasting Machine dia ampiasaina amin'ny fanadiovana ny fanariana, ny firafitra, ny tsy ferrous ary ny faritra hafa. Ity milina fanapoahana fitifirana andian-dahatsoratra ity dia manana karazany maro, toy ny karazana farango tokana, karazana farango roa, karazana fiakarana, karazana tsy manainga. Manana tombony amin'ny tsy lavaka, rafitra matevina, famokarana avo lenta, sns.
Hanger Type Shot vary main'ny rivotra
Hanger Type Shot Blasting Machine dia mampiasa ny fomban'ny fihodinan'ny teboka marobe sy ny fanadiovana, manala ny fasika sy ny hoditr'omby amin'ny fantsom-boasary, mba hisehoan'ny loko vy. Ampiasaina matetika amin'ny kojakoja fiara sy ny bolster, ny sisiny, ny fitambaran-javatra ary ny zotram-piaramanidina faribolana, amin'ny fotoana iray ihany koa dia afaka manadio ny fantsom-batana sy ny kojakojam-pitaovana kely mitovy habe aminy.
Masinina fanapoahana basy ambony
Overhead Hanger Shot Blasting Machine Hook Type ny masinina no karazana milina malemy paika indrindra. Mizara ho masinina karazana batch izy ireo, ary misy faritra maromaro mihetsika, manomboka mihodina, nipoaka ary nivoaka,
Masinina manidina ho an'ny loharano mavesatra
Masinina voatifitra ho an'ny karazana Springs mavesatra ity andiany ity dia ampiasaina amin'ny fanadiovana ny tany, fanesorana ny harafesina, vokatra mihamafy ho an'ny karazan-tsolika antonony sy kely, fametahana ary milina. Mety amin'ny ambaratonga samihafa, afaka miasa tokana na salantsalany ary habe bitika kely . Q32 Series mihintsana fehikibo notifirina famaohana milina manana tombony ny mandroso famolavolana, antonony firafitra, ambany angovo fandaniana ary avo fahombiazana.
Belt Belt Rolling Type Shot Blasting Machine Ity andian-dahatsoratra ity dia ampiasaina amin'ny fanadiovana ny tany, fanesorana ny harafesina, vokatra mihamafy ho an'ny karazan-tsolika antonony sy madinidinika, fanoratana ary fametahana. . Q32 Series mihintsana fehikibo notifirina famaohana milina manana tombony ny mandroso famolavolana, antonony firafitra, ambany angovo fandaniana ary avo fahombiazana.